Mako 16 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
16 Naizvozvo sabata+ parakanga rapfuura, Mariya Magadharini,+ naMariya amai vaJakobho, naSarome vakatenga zvinonhuhwirira kuti vaende vanomuzora.+
2 Vakasvika paguva mangwanani-ngwanani, pazuva rokutanga+ revhiki zuva parakanga rabuda.+
3 Zvino vakanga vachitaurirana vachiti: “Ndiani achatikungurutsira dombo kubva pasuo reguva?”
4 Asi pavakatarira, vakaona kuti dombo rakanga rakungurutswa, kunyange zvazvo rakanga riri guru kwazvo.+
5 Pavakapinda muguva, vakaona jaya rigere kurutivi rwokurudyi rakapfeka nguo refu chena, uye ivo vakadumbirwa.+
6 Iro rakati kwavari: “Regai kudumbirwa. Muri kutsvaka Jesu wokuNazareta, akarovererwa.+ Akamutswa,+ haapo pano. Onai! Pavakamuviga apa.+
7 Asi endai, udzai vadzidzi vake naPetro kuti, ‘Ari kufanoenda kuGarireya;+ muchanomuona ikoko, sezvaakakuudzai.’”+
8 Naizvozvo pavakabuda vakatiza paguva, nokuti vakanga vabatwa nokudedera nokukangaidzika kwazvo. Havana wavakaudza chero chinhu chipi zvacho, nokuti vakanga vachitya.+
Zvimwe zvakanyorwa nemaoko uye shanduro zvakazotevera zvine kugumisa kupfupi pashure paMako 16:8, seizvi:
Asi zvinhu zvose zvakanga zvarayirwa vakazvirondedzera vachipfupikisa kune vaiva naPetro. Uyezve, pashure pezvinhu izvi, Jesu akatumira kuziviswa kutsvene kusingaori kworuponeso rusingaperi nokwavari kubvira kumabvazuva kusvikira kumavirira.
Zvimwe zvakanyorwa nemaoko zvekare (Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi, Codex Bezae) uye shanduro dze(Latin Vulgate, Curetonian Syriac, Syriac Peshitta) zvinowedzera kugumisa kurefu kunotevera, asi kusiri muCodex Sinaiticus, Codex Vaticanus, codex yeSinaitic Syriac, uye Armenian Version:
9 Pashure pokunge amuka mangwanani pazuva rokutanga revhiki, akatanga kuzviratidza kuna Mariya Magadharini, uya aiva nemadhimoni manomwe aakadzinga.
10 Mukadzi wacho akaenda, akaudza vaya vaaiva navo, pavakanga vachichema uye vachisvimha misodzi.
11 Asi ivo, pavakanzwa kuti akanga ava mupenyu uye kuti iye akanga amuona, havana kutenda.
12 Pashure pezvinhu izvi, akazviratidzazve aine chimwe chitarisiko kuvaviri vavo vachifamba, pavakanga vachienda kumaruwa;
13 uye vakadzoka, vakaudza vamwe vose. Asi ivo havana kuvatendawo.
14 Asi kwapera nguva yakati, akazviratidza kune vane gumi nomumwe chete vari voga pavakanga vakatsenhama patafura, akavazvidza nokuti vakanga vasina kutenda uye vakaoma mwoyo, nokuti havana kutenda vaya vakanga vamuona amutswa kubva kuvakafa.
15 Zvino akati kwavari: “Endai munyika yose muparidze mashoko akanaka kuzvisikwa zvose.
16 Anotenda obhabhatidzwa achaponeswa, asi asingatendi achatongwa.
17 Uyezve, zviratidzo izvi zvichava pamwe chete nevaya vanotenda: Vachishandisa zita rangu, vachadzinga madhimoni, vachataura nendimi,
18 vachabata nyoka nemaoko avo, uye kana vakanwa chinhu chinouraya hachingambovakuvadzi. Vachaisa maoko avo pavanhu vanorwara, vobva vapora.”
19 Naizvozvo, pashure pokunge Ishe Jesu, ataura navo, akabva akwidzwa kudenga, akagara pasi kuruoko rworudyi rwaMwari.
20 Naizvozvo, ivo vakabuda, vakaparidza kwose kwose, Ishe paakanga achishanda navo, achitsigira shoko achishandisa zviratidzo zvaiitika.